महानगरको सौन्दर्य चेत - ब्लग - कान्तिपुर समाचार
असार १७, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं महानगरपालिकाले आधा दर्जनभन्दा धेरै कर्मचारी लगाएर रत्नपार्कको आकाशे पुलमा बनाइएको मुरल कला मेटेको खबर सार्वजनिक भयो । कोभिड फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी र सरसफाईमा खटिएकाहरुको सम्मानमा बनाइएको मुरल कला मेट्न महानगरपालिकाले देखाएको हतारो कुनै नौलो थिएन ।
प्रत्येकजसो बिजुलीका पोलमा गुजुल्टिएका तारहरू, ठाउँ कुठाउँ पैदलयात्री अल्झाउन लत्रिएका तारहरू, केहीबेरको बर्षापछि भलमा परिणत हुने बाटोघाटो, सार्वजनिक भित्तामा बर्षौदेखि नमेटिएका राजनीतिक दलका नाराहरू सबैले महानगरको सौन्दर्य बढाएकै थिए । बेलाबखत सहरका चोक कुनामा थुप्रिराख्ने फोहोर, हलक्कै हुर्किएका घासले भरिएका पार्कहरु, सानाठूला खाल्डाको धरापले भरिएको सडक पेटीहरु सबैले सहरको आभा बढाइरहेकै थिए । सहरी सौर्न्दयको यस्तो मानक बनाइरहेको महानगरपालिकाले एउटा मुरल कला मेट्ने हतारो देखाउनु कुनै नयाँ कुरा थिएन ।
सहरको सौर्न्दय जोगाउने नाममा महानगरले यसअघि पनि सडक छेउछाउका गीत गाएर दुई चार पैसा जम्मा पार्ने दृष्टिविहीनहरुलाई पटकपटक खेदेर आफ्नो ‘सक्रियता’ देखाएको थियो । दृष्टिविहीनहरुले कुन दुःखले जोरेको माईक र स्पिकर खोस्दै उनीहरुलाई लेखेटेर आफ्नो बहादुरी देखाएको धेरै महिना बितिसकेको छैन । फुटपाथमा दुईचार घोगा मकै बेच्नेहरुलाई खेद्ने तर ठूला होटलले सडकमै पार्किङ बनाएको पटक्कै नदेख्ने महानगरले बुझेको सौर्न्दयको मानक के हो हामीले देखिसकेका छौं । रानीपोखरीमा डोजर चलाउँदा, कमलपोखरीको कंक्रिट थुपार्दा, माइतीघर मण्डलमा झिलिमिली बत्ती हाल्दा र अनि मण्डलको एकछेउमा कलाको हुर्मत काढ्ने शैलीको नेपालको नक्साको फलामे प्रस्तर आकृति ठड्याउँदा हामीले महानगरको सौन्दर्य देखिआएकै हो ।
सार्वजनिक भित्तामा कुनै पनि नाफामूलक प्रयोजन नभएको कला मेट्न महानगरले देखाएको हतारो अर्थपूर्णमात्रै छैन, त्यसले महानगर हाँक्नेहरुको कलाचेतको गरिबी पनि देखाइरहेको छ । के महानगरले कुनै दल विशेषले सर्मथन वा विरोधमा, जयजयकारमा वा आलोचनामा सार्वजनिक भित्तामा केही नारा लेखेको भए यसैगरी मेट्नसक्ने थियो ? बेलाबखत सहरका कुनाकुनामा कुनै धर्मभिरुले उस्तै खाले नारा पोतेको, कुनै सनकी नेताका कार्यकर्ताले शक्तिको तुजुक देखाउन राजनीतिक नारा लेखेको हामीले देखिआएकै हो । बिजुलीका कुनचाहिँ पोल सद्दे छन् जहाँ कुनै पम्प्लेट नटासिएको होस् ! कुनचाहिँ चोकका कुन भित्ता खाली छन्, जहाँ कसैले कुनै विज्ञापनको बोर्ड नझुण्ड्याएको होस् । यी सबै कुरुप दृश्यहरुले नबिझाएका महानगरका आँखा केही कलाकारले कैयन घन्टाको मिहनेतपछि तयार भएको एउटा कलामा पर्‍यो ।
जुन महानगरमा पिसाबले च्याप्दा पस्ने कुनो छैन, जुन महानगरमा सुस्ताउने गतिलो पाटी छैन, जुन महानगरमा कुम नोठिक्कन पैदल हिँड्ने मार्ग छैन, त्यो महानगरको सौन्दर्य एउटा मुरल कलाले बिग्रन्छ ? सौन्दर्य बिग्रने अरु धेरै कुराहरू छन् महानगरमा । जसलाई गफैमात्र लडाएर पदमा टिकिराखेका मेयरले देख्दैनन्, सुन्दैनन् ।
सहरको सौर्न्दय त्यतिबेलै बिग्रेको हो, जतिबेला २ बर्षमै मेट्रो रेल कुदाउँछु भनेर उनले चुनाव जितेका थिए । सहरको सौन्दर्य त्यतिबेलै बिग्रेको हो, जतिबेला उनले चुनावी वाचाहरु चटक्कै बिर्सिएका थिए र कसैले सम्झाइदिँदासम्म मात्रै पनि उनको अनुहारमा लाजभन्दा क्रोधको रंग मिसिनथालेको थियो ।
सहरको बचेखुचेको सौन्दर्य कोरोनाको पहिलो लहरमा झनै पखालिएको थियो । जतिबेला सडकमा भोकाहरू एक छाक भातको खोजीमा निस्केका थिए । जतिबेला महानगरपालिकाले एक गास भातको आशमा खुलामञ्चमा भेला भएहरुबाट सहरको सौर्न्दय बिग्रने घोषणा गरेको थियो । अनि खुलामञ्चको भूईंमा लस्करै बसेर कागजको प्लेटबाट भात खाइरहेकाहरूलाई तितरवितर पारेको थियो । आफ्नो शक्ति देखाएझैं गरेर महानगरले कैयौं दिनदेखि दाताहरूको सहयोगमा खाना खुवाईरहेकाहरुलाई सहरको सौर्न्दय बिग्रनेगरी खाना नबाड्न आदेश दिएको थियो ।
सहरको सौन्दर्य यहाँका मजदुरहरू भोकै पर्दा खुइलिइसकेको थियो । सहरको आभा यो सहर बनाउने कामदारहरू भोकले च्यापिएर उपत्यका छाडी सयौं किलोमिटर लामो पैदल मार्चमा निस्कँदा मुर्झाइसकेको थियो । सहरको बचेखुचेको सौर्न्दय यहाँका गल्ल्लीको फोहोर बटुल्ने, यहाँका महलको मार्बल घोट्ने, यहाँका शौचालय सफा गर्ने, दिनगन्तीको हिसाब गर्दै मजदुरी गर्नेहरू भोकै पर्दा खुइलिइसकेको थियो ।
यो महानगरले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन खोज्दै कुदिरहेका एम्बुलेन्सको लस्कर र छिटो दागवत्ती दिने पालो आउला भनेझैं गरेर आर्यघाटतिर कुँदिरहेका शव वाहनहरूको लस्कर देखेको धेरै दिन भएको छैन । घरभित्रै थुनिएर बसेका महानगरवासीले मृतकका आफन्तको चित्कार र सामान्य उपचारको आशमा भौंतारिइरहेका मानिसको क्रन्दन भुलिसकेका छैनन् । महामारीको सन्नाटा पनि बिलाउन नपाउँदै, दुईचार झर्को पानीले महानगरको दुःख पनि पखाल्न नपाउँदै महानगरपालिकाले देखाएको सौन्दर्य प्रेम ‘विद्या चिन्तन’को अपूर्व आविष्कार हो ।
जुन महानगरमा रात परेपछि भुस्याहा कुकुरहरूको जुलुस निस्कन्छ, जुन महानगरको सडकपेटीमा भोकले दोब्रिएर र चिसोले कठ्याग्रिएर मानिसहरू सुतिरहेको देख्न सकिन्छ, जुन महानगरका फोहोर चोकहरूमा अझै पनि फेन्सिडिल खाइरहेका र डेन्ड्राइट सुँघिरहेका बालबच्चा देख्न पाईन्छ, जुन नगरमा अझै पनि काम नपाएर एक छाक भात खोज्दै सडक नाप्नेहरूका पाईतालाको भोक-संगीत सुनिन्छ, त्यो महानगरले गरेको सौन्दर्यको चिन्ता नालायकीको एउटा श्रृंखला हो ।
प्रकाशित : असार १७, २०७८ २०:५४
९ महिना लामो नवदुर्गा जात्राको समापन [तस्बिरहरू]
असार १७, २०७८ तस्बिर : बिजु महर्जन
काठमाडौँ — बिहीबार भागस्थी पर्व मनाइएको छ । ९ महिना लामो नवदुर्गा जात्राको अन्तिम यो पर्व मनाइन्छ । पर्वको अन्तिम दिन भक्तपुरमा नवदुर्गाहरुले नाचेका थिए ।
अन्तिम दिन अनुहारमा मखुन्डो लगाएर स्थानीय बासिन्दा पूजाअर्चना गर्दै सहभागी हुन्छन्। । नृत्य सकिएपछि साँझपख मखुन्डोलाई जलाउने गरिन्छ । मखुन्डोको खरानीलाई राखेर अर्को वर्ष मखुन्डो बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
प्रकाशित : असार १७, २०७८ २०:३९